Deg Deg: Madaxweyne Farmaajo Oo Imika Xilka Ka Qaaday Sarkaal Sare Iyo Xilka U Ka Hayey Maamulka Muqdisho - Wargane News
Home Somali News Deg Deg: Madaxweyne Farmaajo Oo Imika Xilka Ka Qaaday Sarkaal Sare Iyo...
Muqdisho: Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa saaka xilkii ka qaaday maayarka magaaladda Muqdisho ahaana badhasaabkii gobolka Banaadir Thabid Cabdi Maxamed oo lagu tiriyo inuu ahaa siyaasiyiinta Soomaaliya ee wakhtigan kuwooda ugu sumcad badan, uguna wax qabad badna.
Mayor Thabit iyo madaxweyne Farmaajo ayaa iskaga hor yimid maamulka magaaladda Muqdisho.
Thabit ayaa ku doodaayay in xukuumadda federaalku faraha ka qaado maamulka gobolka Banaadir iyo magaaladda Muqdisho, sida aanay u farogelin maamul goboleedyada oo kale.
Xil ka qaadistiisa ayaa si weyn waxay uga cadhaysiisay hogaamiye dhaqameedka gobolka Banaadir oo maalmahii ugu danbeeyay qaban qaabinaayay shir ka dhan ah dawladda Farmaajo.
Thabit ayaa intuu hayay xilka waxaa lagu xasuusta gacantii weynayd uu u fidin jiray dadka danyarta ah ee ku nool magaaladda Muqdisho, isagoo noqday xidig aadna loogu ammaanay qaabku u maamulay qaraxayaddii bishii October ka dhacay magaaladda Muqdisho ee dadka badani ku le’edeen.
Waa nin aad u da’yar, isla markaana lagu tilmaamo inuu yahay nin daacad ka ah shaqadiisa, malaha balwad, waana ta u sahashay inuu isbedel weyn ku sameeyo magaaladda Muqdisho intuu xilkeeda hayay
Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Dafiray Musharaxnimada Jamaal Cali Xuseen